Shirkadda Golis oo maalgalisay Mashruuc gabdho mas’uul ka yihiin | Golis Telecom Somalia
Shirkadda Golis oo maalgalisay Mashruuc gabdho mas’uul ka yihiin
Shirkadda Golis Talecom ayaa maal-galisay mashruuc ganacsi ay gabdho Ma’uul ka yihiin. marshruucaas ayaa ah mid loogu magac daray “Xilwa Fast Food”.
Rugta ganacsiga iyo warshadaha ayaa soo agaasintay xafladii lagu wareejinayey deeqda lacageed ee ay shirkada Golis Telecom siisay gabdhahii la yimid fikradda ganacsi.waxaana xafladda goob-joog ka ahaa wasiirka ganacsiga iyo warshadaha C/laahi Axmed Gamuute,hoggaanka xiriirka dadweynaha ee shiradda Golis, guddoomiye ku-xigeenka rugta ganacsiga iyo warshadaha puntland, qaar ka mid ah gabdhihii helay deeqda lacageed ,iyo weliba marti sharaf kaloo oo xafladda ka soo qayb gashay.
Ugu horayntii xafladda ayaa kalmad ku aadan munaasabadda waxaa soo jeediyey hogganka xiriirka dadweynaha ee shirkadda Golis Mudane/Faarax Xaaji Mire oo sheegay in shirkaddu ay taageero u fudiso dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada.
Wuxuu hoggaanku sheegay in dhiiri—galinta gabdhaha ay tahay mid waajib ah “ waayo qeyb lixaad leh ayeey bulshada kaga jiraan”.
Mar uu ka hadleyey fikaradaha ganacsiga iyo mudnaanta gaarka ah ay wadato ayuu hoggaanku ku daray “ fulinta mashruuc kasta wuxuu u baahanyahay helidda fikrad ganacsi oo wax-ku-ool ah, hadii qofku fikrad helana wuxuu u badali karaa aragtidaas wax la taaban karo oo faa’iido uu ka heli karo”.
Wuxuu intaas ku daray hoggaanku in shirkadda Golis ay si gaar ah u dhiiri-galiso waxbarashada,caafimaadka,ganacsiga,horumarinta,iyo wax kastoo bulshada ka faa’iidaysan karaan.
Waxaa isla madasha xafladda ka hadlay Maxamed Caydiid Jaamac oo ah guddoomiye ku-xigeenka rugta ganacsiga iyo warshadaha Puntland oo sheegay in ay muhiim tahay in la taageero gabdhaha si dhaqaalaha u kordho,isla markaana gabdhuhu ay u noqdaan kuwo bulshada ay ka soo jeedaan wax tara.
Caydiid ayaa sheegay in rugta ganacsiga iyo warshadaha puntland ay siin doonto dhalinyarada wiilal iyo gabdhaba leh tababaro ku saabsan ganacsiga iyadoo kor loo qaadayo xirfadda iyo khibradda ganacsi ee dhalintaas.
Gabagabadii xafladda ayaa waxaa soo xirey wasiirka ganacsiga iyo warshadaha puntland C/laahi Axmed Gamuute oo ku dheeradey in gabdhuhu yeeshaan wuxuu ugu magac daray “ self skills” taasoo wax ka tari doonta ayuu yiri “ in ay bulshada soomaaliyeed ay dawr muhiim ah ka ciyaaraan, ubadkana si fiican u bar baariyaan”.
Wasiirku wuxuu sheegay in taageeridda gabdhaha ay tahay mid loo sameenayo bulshada oo dhan “ waayo waxay kula noqon doonaan taageeradaas gurigii ay ka soo jeeday iyo kan ay u hoyato”.